Elman oo Guul ka gaartay Gaadiidka & Xiddigihii hore ee Jeenyo oo Bandhig fiican sameeyay! | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA SOMALIDA - Elman oo Guul ka gaartay Gaadiidka & Xiddigihii hore ee Jeenyo oo Bandhig fiican sameeyay!
Elman oo Guul ka gaartay Gaadiidka & Xiddigihii hore ee Jeenyo oo Bandhig fiican sameeyay!
kooxda Kubadda Cagta ee Jeenyo ayaa Guul Muhiim ah ka gaartay naadiga Gaadiidka kulan ka tirsanaa horyaalka Dalka, kaasoo ka dhacay Garoonka Koonis ee Degmada Cabdicasiis,
Gaadiidka ayaa ku jirta waddadii ugu liidatay ee bandhiggeeda, waxayna weli suuragelin la’dahay in ay 1 guul ka keenaan horyaalka oo ay ciyaareen kulankoodii 7aad.
Elman waxaa Goolal 3-0 ah ay ku dirtay Gaadiidka, waxaana goolasha u dhaliyay laacibiintii hore ee kooxda Jeenyo Anwar Siid Cali Shakunda iyo Maxamuud Cabdi Nuur Meyman oo dhaawac waqti dheer ah kasoo Laabtay.
Meyman ayaa furay dhaliska Goolasha Ciyaartaas, waxaana uu dhaliyay daqiiqaddii 65-aad ee ciyaarta, halka goolka labaad uu dhaliyay Anwar oo mid kalena sii raacsaday, waxayna taasi Elman u suuragelisay in ay hadda yeeshaan 9 dhibcood dhanka kala sarreynta horyaalka dalka.
Elman waxay hadda 1 dhibac u jirtaa kooxda Booska 4aad ee Banaadir SC, in kasoo aysan iyada qudheedu sanadkan ku billaaban sidii la filayay maaddaama ay la wareegeen xiddigo badan iyo Tababare ka mid ah kuwa ugu dhismaha wanaagsan dhanka kooxda dalka Cabdi Joon.